Egwu Google Play mechara rute na njedebe YouTube Music | Gam akporosis
Egwu Google Play na-abịa na njedebe
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo, Noticias
Ọ bụ ihe ọ na-ekwu kemgbe oge ọkọchị nke afọ gara aga, Egwu Google Play Music nwere ụbọchị ya. Ya mere, ọ dịla, Google kwadoro na Google Play Music ga-agbada n'akụkọ ihe mere eme. Ugwu ikpo okwu Google YouTube Music ga-anọchi ya na ọ bụ okwu nke oge, n’amaghị kpọmkwem ole, ka ọ na-apụ na map.
Ha bụ n'ezie nyiwe abụọ nke na-enye ọrụ yiri nke a, na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ha abụọ ịnọgide na-arụ ọrụ n'otu oge. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu, na mgbe mara ọkwa nke ofufe nke Egwú Google Play, nke a ga-aga n'ihu na-ebikọ ọnụ na nwa oge YouTube Music oge ụfọdụ.
Google Play Music ga-abụ akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịghị anya
Egwú Google Play enyekwara ndepụta nke na-agafe ngwa drọwa nke ngwa ehichapụ site na ikpo okwu Google Play Store. A n'elu ikpo okwu na ka Enwere m ọtụtụ ndị ọrụ ga-ebufe ndepụta ha na ọdịnaya ha na YouTube Music. A nyefe n'etiti Google nke nyiwe nke A ga-enye ya ka e wee rụọ ya n'ụzọ dị mma maka ndị ọrụ niile. Google ga tinye na menu nke akụkọ ugbu a bọtịnụ «nyefe» nke mere na usoro a na akpaka. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike iwe ogologo oge karịa ka achọrọ n'ihi ọnụ ọgụgụ egwu anyị nwere ike bulite na akaụntụ ahụ.
Ruo 50.000 songs ma ọ bụ faịlụ ọ ga-ekwe omume inwe uploads ka ígwé ojii na akaụntụ Google Play Music anyị nwere ike ịnweta na ntanetị ma ọ bụ site na nbudata. A ga-ebufe egwu ndị a ga-ebufe ugbu a na ikpo okwu ugbu a. Ndetuta egwu ọkpụkpọ, egwu ma ọ bụ ndekọ que ga-enwe ọtụtụ ohere na YouTube Music. Iji zere mkpesa ma ọ bụ nkwupụta gbasara ohere ndị ọrụ nwere ike ịnwe na YouTube Music Google emeela ka ikike 100.000 dị okpukpu abụọ kwa akaụntụ.
Ndị ọrụ nke Google Play Music platform na-enweghị njedebe akaụntụ ga-anọgide na-enwe otu uru na akaụntụ YouTube Music ha. Otu n'ime ọdịnaya nke Google achọtala ihe mgbochi bu pọdkastị. Ihe na Ọ gaghị ekwe omume ịkwaga YouTube Music ebe ọ bụ na ikpo okwu a enweghị ihe ọkpụkpọ pọdkastị agbakwunyere, ma ọ dịkarịa ala ugbu a. Ya mere, ndị chọrọ ịkwaga pọdkastị ebudatara na Play Music ha ga-eme ya kwupụta Google Podcast. A na-eche na a ga-akwagakwa mbugharị n'otu ụzọ ahụ yana faịlụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Egwu Google Play na-abịa na njedebe
SwiftKey ghọrọ Microsoft SwiftKey kiiboodu ma anyị niile bụ "plof"
Ugbu a KartRider Rush + dị na gam akporo, nke nwere ike ịbụ nsogbu nke Mario Kart Tour